NY FANASAN'NY TOMPO - Alakamisy Masina Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Herinandro Masina 2016 – Andro fahatelo – Matio 27:46 | Marka 15:34
Faly Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo mahatratra izao Herinandro Masina izao. Ho to tokoa eo amin’ny fiainantsika anie ny asan’Andriamanitra izay notanterahany tampony ho antsika teo amin’ny hazofijaliana. Manaraka izany dia indro misy fampianarana fohy momba ny Fanasan’ny Tompo izay atolotra anareo. Mirary soa tompoko.
Andro anankiray manana ny mahaizy azy manokana ao anatin’ny Herinandro Masina ny Alakamisy Masina. Ny Fanasan’ny Tompo avy hatrany no tonga ao an-tsaina amin’izany satria izany tokoa no manamarika manokana ity andro ity. Ankoatry ny Batisa dia ny Fanasan’ny Tompo no Sakramenta izay notendren’i Jesosy (vakio Mat 26:26-29; Marka 14:22-25; Lioka 22:14-20 ary 1 Kor 11:23-26) ho fomba fanao ao amin’ny Fiangonana mba hanolorony ny fahasoavany (fiasam-pahasoavana) amin’ny mpino Kristiana. Araka izany dia zava-tsarobidy tokoa eo amin’ny fiainan’ny Fiangonana, indrindra eo amin’ny fiainan’ireo mpino Kristiana izay mandrafitra azy ny Fanasan’ny Tompo.
Teo an-katoky ny fankalazana ny Paska Jiosy no vanim-potoana izay nanatanterahan’i Jesosy izany Fanasany izany. Araka izany dia manana ny heviny mifandray amin’izany Paska Jiosy izany ny Fanasan’ny Tompo. Teo an-katoky ny nijaliana sy nahafatesana ary ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty ihany koa. Izany hoe, mifamatotra tanteraka amin’ny hazofijaliana sy izay nataon’ Andriamanitra sy kendreny amintsika teo amin’ny hazofijaliana koa ny Fanasan’ny Tompo.
1. Ny Sakafon’ny Paska Jiosy sy ny Fanasan’ny Tompo.
Jesosy Kristy dia notondroin’i Jaona mpanao batisa hoe « … Ny Zanak’Ondrin’Andriamanitra, izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao » (Jn 1:29). Araka izay voalaza teo ambony dia Sakafom-panafahana tamin’ny fanandevozan’ny Egyptiana ny sakafon’ny Paska Jiosy. Tamin’ izany fanafahana izany dia nisy ny fahafatesana (ny lahimatoan’ny Egyptiana rehetra) ary nisy koa ny fahavelomana noho ny ran’ny zanak’ondry dia ny Israelita izany (Eksd 12:1ff.). Ao amin’ny Fanasan’ny Tompo dia ny tena aman-dran’i Jesosy Kristy (Ilay Zanak’Ondrin’Andriamanitra) izay voahombo tamin’ny hazofijaliana (fahafatesana) sady nitsangana tamin’ny maty (fahavelomana) no sakafo. Sakafom-panafahana ihany koa izany, eny fanafahana amin’ny fahafenoany tokoa aza satria sakafo manafaka ny olona mihinana izany tamin’ny fanandevozan’ny OTA sy ny fahafatesana mandrakizay izany. Raha miteny Jesosy hoe « Ataovy izao ho fahatsiarovana Ahy » dia ny fanaovana izany fanafahana tamin’ny fahafenoany teo amin’ny hazofijaliana izany ho present eo amin’izay mihinana ny sakafon’ny Fanasan’ny Tompo koa no tiany ampitaina amin’izany. Ny fihinanana izany sakafom-pahafahana izany dia midika koa fa atao tena tonga nofo ao amin’izay mihinana izany ilay fahafahana entiny, atao tena tonga fiainana tokoa izany.
2. Ny Fanasan’ny Tompo sy ny Hazofijaliana
Voalaza mazava ao amin’ny teny izay nanendrena ny Fanasan’ny Tompo ny hoe « … Tamin’iny alina iny izay namadihana Azy ( na ‘nanolorana Azy ho amin’ny fahafatesana’) ». Notenenina izany mba ho fanindriana ny fifamatoran’ny Fanasan’ny Tompo sy ny hazofijaliany.
Araka ny fomba fisainana Jiosy, ny sakafo dia sady mampiombona ny sakafo amin’izay mihinana azy no mampiombona ihany koa amin’ny mpiray latabatra mihinana izany. Jesosy tenany dia tsy nihinana tamin’ny sakafon’ny Fanasan’ny Tompo (cf. Lioka 22:16, 18; tsy ara-teolojia ny hiran’ny antoko mpihira manao hoe « miara-misotro amin’i Jesosy ny ran’ny fanadiovana. ») kanefa amin’ny alalan’ny fanomezany ny tena aman-drany ho sakafon’ny Fanasany dia mampiombona ny tenany amin’ny izay mihinana izany Izy.
Teo am-panatanterahana izany Fanasana izany dia nambarany mazava tamin’ireo izay niombon-databatra fa ny fahafatesany hisolo ny maro dia hahatonga azy ireo ho isan’ny vahoaky ny Fanekena Vaovao (cf. Mat 26:28; 1 Kor 11:25; cf. Marka 10:45). Raha fintinina ny atao hoe Fanekena dia ny fiombonan’Andtra sy ny olony izany (cf. Jer 31:31-34).
Tanteraka ao amin’ny fiombonana amin’i Jesosy amin’ny fihinanana ny tena aman-drany ao amin’ny sakafon’ny Fanasan’ny Tompo izany fiombonana izany. Ny fiombonana koa anefa dia fiombonana Aminy amin’ny fahafatesany, dia ilay fahafatesany ho famotehana tanteraka otantsika izay nentiny, ary fiombonana koa amin’ny fahavelomany, dia ilay fahavelomany izay fahariany ny miombona Aminy ho zavaboahary vaovao miaina amin’ny aina izay iainany ihany koa. Ny olona maty amin’ny ota sy velona ho an’Andriamanitra no miombona amin’Andriamanitra. Ny Fanasan’ny Tompo no iasan’Andriamanitra hahatanteraka izany eo amintsika.
Tsy Jesosy Kristy sy tsirairay izay mihinana ny sakafon’ny Fanasan’ny Tompo ihany no ampiombonin’izany sakafo fa ny mpiray latabatra rehetra koa. Tsy ny heloka izay nampisaraka ny tsirairay tamin’Andriamanitra ihany no nopotehana na navela tao amin’ny fihinana ny tena aman-dran’i Jesosy izay maty teo amin’ny hazofijaliana fa ny heloka izay nampisaraka azy koa tamin’ireo mpiombon-databatra aminy koa (cf. Hataky ny Tompo: famelankeloka roa sosona [verticale et horizontale] izay tsy misaraka, Mat 6:12; jereo koa ny Mat 5:24).
Kapoaka iray ihany no niarahan’ny mpiombon-databatra nisotro ary mofo iray ihany koa no niarahany nihinana. Hoy ary Paoly Apostoly: « satria iray ihany ny mofo dia tena iray ihany isika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin’izany mofo iray izany avokoa » (1 Kor 10:16-17).
Pastora RAFALIMANANA Jean-de-Dieu
Mpampianatra ao amin’ny SALT – Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia